Ọnwụnwa ▷ Discover Online ▷ ➡️
I nwere ikike igbanwe ma nwe mmetụta zuru oke.
Ihe kaadị tarot pụtara "Ikpe" ma ọ bụ "ahịrịokwu ahụ"
La Akwụkwọ ozi ikpe, mgbe ụfọdụ a na -akpọ «Resurrección«Na -anọchite anya nnukwu nnọkọ ahụ nke ndị oge ochie kwenyere na ọ ga -eme otu ugboro n'afọ niile. Nke a bụ oge a na -ewe ihe ubi ma na -ebubata ha ebe ha si, na mpụga mbara igwe. Mgbe ahụ ụwa ọ na-seeded na a ogbe nke ọhụrụ mkpụrụ obi na usoro amalite ọzọ.
Site n'echiche nke oge a, nnukwu nzukọ a - nke gụnyere mmadụ niile ị dịrịla na mkpụrụ obi ọ bụla onye gi na ya luru miri emi - o zutere jiri nlezianya mezue usoro ahụ. N'ụzọ ụfọdụ, anyị na-eme ncheta nloghachi a na etiti kwa afọ na ụbọchị ọmụmụ anyị.
N'okwu nkeonwe, ndị Tarot kaadị ikpe na-egosi nnwere onwe pụọ n'ọgba aghara dị n'ime, wee kpochapụ ọwa, nke a na-elibe onyinye na onyinye sitere na onyinye ndị gara aga site n'aka mmadụ n'oge ndụ a. Kaadị a na-adụ gị ọdụ tụkwasịrị obi na usoro mmeghe, n'ihi na ihe na-apụta bụ nke dị elu mgbe niile. Can nwere ike ịgbalịsi ike igosipụta dịka ịdị n'ụdị dị iche iche, ma nyere aka kpalite nzaghachi ahụ site n'aka ndị ọzọ.
Hapụ ihe gara aga gị. N'ọdịnihu na-anabata gị n'ụba nke uto na mgbanwe.
La Deck nke ikpe na-adụ ọdụ ka ị hapụ onwe gị tolite, gbanwee ma hapụ ihe ndị zoro ezo n’ime onwe gị. Bibie mgbalị ndị na-enweghị isi n’elegharaghị ọrụ gị anya. N'otu oge, tinye ike gị na uto ọhụrụ.
Ọ dịghị mkpa ịjụ ndị ọzọkama jụ jụ ịbụ ndị ndị na-akparị ihe arụ. Usoro a abụghị maka ha agbanyeghị. Ọ bụ gbasara gị na ọchịchọ gị ịgbanwe ndụ gị wee bụrụ onye zuru oke. Tụkwasị obi gị, wee kwe ka edemede a dị ịtụnanya mee.